"Meta-Bel" - inkampani okuyinto yasungulwa ngo-1998 ngu-nokuhlanganiswa izinkampani ezine onguchwepheshe womshini ubunjiniyela kanye nempahla yasendlini. Njengoba isiqondiso main ngokuqinile kuphuma inkinga-kuhhonela fireplaces, esekelwe - the steel. Njengoba lisetshenziswe Ceramic Tile umhlobiso, okuyinto smoothes kahle shades amnyama.
Sezitofu "Angara" ihlukile aphansi, kanye izinga kahle. Namuhla, le nkampani inyathelisa Ukushisa imishini "Meta", okumelelwe umugqa "Angara". On ukudayiswa ungathola Ukubika Inkinga YeWindows Ukushisa amayunithi, umthamo zazo zokhahlamba kusuka 9 kuya ku-12 kW. Ngo inqubo ukukhiqizwa esetshenziswa 5 mm steel ishidi, kanye nobukhulu bezinhlamvu yangaphandle imbozwe black ukushisa ukumelana koqweqwe lwawo powder.
Njengoba umehluko oyinhloko imele umnyango kunalokho olubanzi, eyenziwe ukushisa-resistant glass sobumba. Lesi sici sivumela amakhasimende ukujabulela ilangabi ngasiphi ibanga. "Hangar" - kuhhavini, lapho base unit wenziwe ishidi steel, esikhaleni phakathi kwawo Ukuhanjiswa emoyeni ukufuthelana. Air mass Kondliwa izimbobo Ukubika Inkinga YeWindows etholakala engxenyeni engenhla isakhiwo. isixazululo enjalo yenza kube lula ukuxoxa egumbini ngesikhathi esifushane on kubekwa ukhuni.
"Angara" - kuhhavini, okuyinto izici zangaphandle kakhulu efana Ukushisa Imishini "Yenisei" lenkampani efanayo, kodwa umehluko isekhona. Basuke uboniswe lateral amawindi ezicwebezelisiwe kanye nomklamo ezithakazelisayo - ingxenye ohlangothini kobuso tiled peach umthunzi. The elingaphakathi omnyama, okuyinto sashintsha imigqa oqoshiwe. Ukukhethwa kukhona ifaka ukuthi musa kuthinte izindleko. Isikhala ingaphakathi fireclay esithandweni ehlotshiswe tile, kukhona olufakiwe grate wenza cast iron. Ngaphansi lokuzula umlotha lesithando wokudonsa aphume kuyinto elisophahleni evulekele zokubasa. Ngesikhathi esifanayo ongabeka cishe 4 kg fuel, kanye nesikhathi omlilo kuyoba amahora angaba ngu-7, uma dampers zivaliwe.
"Angara" - kuhhavini, ebonakala maintainability, njengoba chamotte faka ungayithola enye uma kunesidingo. uchungechunge Kuchazwe kufanelekile amalahle Villas, izindlu kanye izindlu nge endaweni esingeqile 120 m 2.
Izici amamodeli we amaziko "Angara" uchungechunge
On ukudayiswa ungathola izitofu kamakhi "Meta", okuyinto etholakala ezahlukeneyo ezintathu. I yokuqala isikisela ukuthi umzimba ukushisa has a usayizi yesibili lakhulisiwe, kwathi omunye ihlukile ejwayelekile Ubukhulu.
imodeli okuyisisekelo "Angar" kuyinto emincane futhi ngaphambili, isisindo salo 150 kg, futhi izinhlangothi ezilandelayo: 1.01 x 0.56 x 0,51 m. iziko okunjalo "Hangar" - esithandweni okuyinto aluhileli ilungiselelo isisekelo kanye fuel angenza briquettes noma ukhuni. Umenzi alikukhuthazi ukubeka amalahle, ngoba lapho walishisa kuziwa nemikhiqizo yalo, ukushisa ikhishwe inqwaba. A imishini efanayo asakhelwanga lokushisa eliphezulu. amandla ilangabi kungase kushintshwe ngu afuthwe a damper.
Ngokusho abasebenzisi, kuhhavini "Angara" chungechunge ziye kakhulu izinga izici futhi ube ngemali ephansi. Okungenani eminyakeni embalwa izakhiwo ezinjalo tisebenta lemukelekako. Nokho, kungaba nezinye abathengi bezwa ukuthi ububanzi ngefasitele kancane kakhulu elikhulu okwesikhathi okukhipha okuqhubekayo, yingakho ukushisa ngampela ingu "izimpukane". Isinqumo kuyinto ukufaka damper phezu tube, izinga omlilo ke kungase kushintshwe.
Izici-Iziko somlilo "Angar aqua"
Lokhu kuhhavini "Angara" nge ukushisa yakhelwe ilungiselelo yamanzi Ukushisa izinhlelo nge amabhethri. isisindo salo sikhulu 150 kg, kuyilapho ngesikhathi osayizi kumadivayisi alandelayo :. 1.02 x 0.55 x 0.49 cm Idatha kuhhavini ungakwazi ukuxoxa nabo 230 m 3.
amandla Thermal kuyinto 18 kW, inxenye yawo phezu kwengungu amanzi.
Ukusebenzisa le mishini kungaba kumasistimu avaliwe bese uvula nge kwegazi wokubacindezela noma ophoqelelwe. ngaleyo ndlela Isifunda ungase ube futha. Lokufuduka eziyinkimbinkimbi kumele singeqi 130 l. Uma ufuna ukuthenga isitofu "Angara", kumelwe sikhumbule ukuthi inani layo akubandakanyi nokufakwa uxhumano. Intengo akubandakanyi futhi noshimula, kanye isivikelo futhi izakhi asizayo. Ukuze ukubuyiselwa noma esikhundleni the tile ohlangothini kungaba zisuswe.
Kusukela amazwi abathengi limenyezelwe umthamo oluhambisana nemingcele langempela. Lapho uvula ngokugcwele umlotha emgodini nomthwalo fuel kuhhavini, the radiators nemfudumalo njengoba isigamu sehora. Abathengi bathi umsebenzi okunye ngempumelelo uzodinga kuphela ukusetha kancane ukubola imodi ke izinga lokushisa endlini zizogcinwa. Abathengi aveze ukuthi petrol libanzi, kodwa lokususa amanga kwenye indawo - umnyango Ceramic ngibhema ngokushesha okukhulu.
Izici somlilo "Angar-12"
"Angara 2012" ingenye models ngobukhulu, imishini ukala 175 kg. Ubukhulu balo kukhona 1.04 x 0.7 x 0,535 m. Ungase futhi ube nentshisekelo amandla kuba 12 kW. Lokhu kubonisa ukuthi ukushisa ngosizo lokhu imishini kungaba ekhaya endaweni 120 m 2. Uma uqhathanisa izindleko somlilo nge intengo kuhhavini ejwayelekile, kuyoba ephakeme kunaleyo 30%, ngoba egumbini amandla omlilo futhi ububanzi anda. "Angara 2012" ivumela ukusetshenziswa 50-isentimitha ezisemlilweni kungenziwa ngokuthi a inzuzo enkulu.
Kuhhavini ngenhla echazwe "Angara", ukubuyekezwa okuyinto ngokuvamile omuhle kakhulu, ngokusho imibono amakhasimende, isebenza kahle kakhulu, umklamo akuyona egculisayo. Nokho, kubalulekile ukukhumbula ukuthi tile ambozwe bangase crack nokusingatha anolaka. Lokhu ungakwazi ukuqonda ukufunda imicabango yabantu abathengi abathi ukuthi ngemva tilting izingcezu ezimbalwa wahamba imifantu, ngakho kwadingeka asuswe, kodwa lesi sici akuphazamisi ukusebenza.
Kungani ingcindezi yokwehla kwezinga uhlelo Ukushisa? Relief umphini kohlelo bafudumale. kufanele kube kangakanani ingcindezi ohlelweni Ukushisa
Ukulungisa of microwave Ohhavini ngesandla. LG imethrikhi ukulungisa
Ukukhetha fan egumbini lokugezela
Amatshe amanzi Japanese ngoba imimese imimese
Kuyini imfucuza ukhuni Chipper?
Black jade: impahla, izithombe kanye nokubuyekeza
Ibanga uzitholele laser Leica: izici kanye nokubuyekeza izindlela engcono
Esibukweni Baroque - kukhombisa okunethezeka
Hhayi Knife nokufaneleka - Ukuze wandise ivolumu amabele